Weerar kooban oo saaka Aaga TUKO-RAQ ku dhexmarey Puntland iyo Somaliland. – Puntland Post
Posted on January 28, 2018 January 28, 2018 by Dhiirane
Weerar kooban oo saaka Aaga TUKO-RAQ ku dhexmarey Puntland iyo Somaliland.
Wararka laga helayo Deegaanka Tukoraq ayaa sheegaya weerar ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo subaxnimaddii horre ee maanta halkaas ku dhexmarey labo ciidan oo ka kala tirsan Puntland iyo Somaliland ka dib markii la sheegay weerar gaadmo oo ay waaberigii horre ku qaadeen fariisimo ay degan yihiin ciidanka Somaliland cutubyo ka tirsan ciidanka Puntland oo sida la sheegay ka careysan daahniinka mudada ka qaatey Puntland diyaargarowga ay ugu jirto dagaal ka dhan ah Somaliland.
Faahfaahin rasmiya lagama hayo jiritaanka khasaare ka dhashay iyo in kale weerarkii saaka oo socday muddo kooban, wallow ay u sheegeen Warbaahinta PUNTLND POST qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka Puntland ee jooga jiida Tukoraq inaanu jirin khasaare soo gaarey dhinacooda.
Dhinaca kale warar madax banaan oo ay helayso PUNTLAND POST ayaa sheegaya jiritaanka khilaaf kala aragti duwanaansho oo u dhaxeeya xubno ka tirsan guddiga difaaca sida Madaxweyne kuxigeenka Puntland iyo Taliyaha ciidanka oo ku kala aragti duwan daahniinka uu qaatey hawlgalka Puntland ku qorsheynayso inay kula dirirto maamulka ay dariska yihiin ee Somaliland.
Isku soo wada duuboo weerarkii saaka ka dhacay Aaga Tukoraq ayaa warar madax banaan sheegayaan inay qaadeen ciidamo ku fikir ah Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar (Camay) oo ka careysan muddada ay sii caga cageynayso jawaabta Puntland ka bixin lahayd duulaankii 3 saddex todobaad ka hor Maamulka Somaliland uu ku qabsadey magaalada Tukoraq.